निक जोनस परिवारसहित भारत आउदै, प्रियंका र निकको इन्गेजमेन्ट पार्टी कहाँ ? – Everest Dainik – News from Nepal
निक जोनस परिवारसहित भारत आउदै, प्रियंका र निकको इन्गेजमेन्ट पार्टी कहाँ ?
काठमाडौं, भदौ १ । बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्री प्रियंकाको इन्गेजमेन्टको क्रममा भेटघाट राम्रोसँग नभएको भन्दै निक तथा उनको परिवार भारत आउँदै छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यही अगष्ट १८ तारिखमा प्रियंका चोपडाले इन्गेजमेन्टको खुशियालीमा भब्य पार्टीको आयोजना गर्न लागेकी छिन् ।
ट्याग्स: Nik jonas, Pryank copada